Amadolobha aseButswana Izifunda zase Butswana
IButswana inezifunda eziyi-17. Ngezansi uhlu lwezifunda zase Butswana. Sowa Kgalagadi District North-East District Lobatse Central District, Butswana Gaborone Selebi-Phikwe Francistown Chobe District Orapa South-East District Kweneng District Ghanzi District North-West District Jwaneng Southern District Kgatleng District
Lesifundazwe sinamaphethelo nezwe elilodwa; iButswana enyakatho eNingizimu Afrika lesifundazwe sinamaphethelo nalezifundazwe; EGoli empumalanga IFuleyisitata eningizimu mpumalanga ILimpopo enyakatho mpumalanga INyakatho Kapa entshonalanga
INyakatho Kapa yisifundazwe saseNingizimu Afrika. Ngobukhulu bendawo, lesifundazwe sikhulu kunazo zonke izifundazwe zaseNingizimu Afrika kodwa ngokwenani labantu sincane kunazo zonke izifundazwe zaseNingizimu Afrika. Isiqongo salesifundazwe iKimberley.
Emma Wareus iyinhlangano indlovukazi ubuhle kusuka IButswana owabeka lokuqala umgijimi-up kuya Miss World 2010 mhlaka 30 ngoMfumfu 2010 ku Sanya, China. Lona ukubekwa ophakeme kunayo ngokuba owesifazane kusuka lakubo emlandweni we pageant. Futhi nokubekwa esiphezulu a IButswana ubuhle indlovukazi kusukela Mpule Kwelagobe won Miss Universe 1999. Ethola iziqu Rainbow High School ngo-2008.
Malebogo Marumogae is a indlovukazi ubuhle ababemelela IButswana eMiss World 2007 eChina. Marumoagae iziqu enyuvesi ne degree a impohlo sika kwezomnotho kanye labantu izifundo.